Binary Options Signals Software Ka vfxAlert | vfxAlert official blog
Calaamadaha vfxAlert ee biraawsarka Chrome
Calaamadaha fursadaha binary software ka vfxAlert tiro balaadhan oo ah qalab loogu talagalay falanqaynta suuqa kakan: tilmaamayaasha cusub "Isbeddellada" iyo "mitir xawaare", jadwalka dhaqaale, gooldhalinta TradingView. Laakiin, waxaa jira wax sahlan sida loo helo lacag ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah - ku dheji kordhinta biraawsarka Chrome.
The kordhin vfxAlert waxa lagu xiraa sida nidaamka caadiga ah, in tiradaasi ay jiraan waa edbinta ku saabsan sida loo sameeyo in Web Chrome ah Store:
Goobaha, xulo dallaalka iyo habka loo soo bandhigo galka calaamadaha:
Waxaad bilaabi kartaa ganacsiga adigoon soo dejisan codsi desktop ah; aynu isticmaali istaraatijiyad fudud oo laga heli karo bilowga ah.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamayaal heerar:
'Cidhiidhiga' kanaalka qiimaha Bollinger Bands, ayaa aad ugu sarreeya suurtagalnimada dhaqdhaqaaq xoog leh ka dib dhammaystir buuxa. Xaaladda ka soo horjeedda ayaa lagama maarmaan u ah ganacsiga cirifka xudduudaha: marinku waa inuu ahaadaa ugu yaraan 30-40 dhibcood, ikhtiyaarrada ayaa noqon doona mid aan faa'iido lahayn, xitaa haddii calaamadaha binary ee bilaashka ah ay muujinayaan jihada saxda ah;
WAC (Kor) - xulasho. Qiimuhu wuxuu ka durkay xadka hoose ee Bollinger ama wuxuu jabayaa khadka dhexe ee hoose ilaa kor. Stochastic waxay ka sarreysaa heerarka eber ama aagga la iibsaday.
PUT (Down) - xulasho. Xaaladaha iska soo horjeeda - sicirka kama badin xadka kore ee Bollinger ama qiimaha ayaa dhexda ka jebinaya kor ilaa hoos. Stochastic sidoo kale waxay hoos ugu sii socotaa in la iibiyo.
Calaamadaha ganacsiga tooska ah ayaa lagu muujiyaa iyadoo loo eegayo nooca liisankaaga. Haddii nooca Pro ah kordhintu aysan bixinaynin macluumaad buuxa oo ku saabsan calaamadaha (Nooca Bilaashka ah), gal bogga vfxAlert. Haddii dhibaatadu sii jirto, la xiriir taageerada;
Xitaa waqtiga daqiiqadaha, Stochastic marar dhif ah ayey tagtaa aagagga xad-dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo Stochastic jimicsadaan in hal jiho - aad ka furan kartaa doorasho ah!
Marba marka ka dambeysa dhaqdhaqaaqa dhinaca suuqa ah, waxaa sii kordheysa suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammeystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah waa suurtagal in la furo ganacsiyada calaamadaha ugu horreeya ee sicirka qiimaha iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ka socda vfxAlert;
Intii lagu guda jiray daabacaadda wararka aasaasiga ah iyo tirakoobka, ma fureyno xulashooyin 30 daqiiqo ka hor warka iyo 30 daqiiqo ka dib daabacaadda; ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!